ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ပင်လယ်စာတွေစားသုံးခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းပါသလား - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ပင်လယ်စာတွေစားသုံးခြင်းဟာ အန္တရာယ်ကင်းပါသလား
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 12/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာအစာအာဟာရ မျှတအောင် စားသုံးဖို့ဟာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် ။ အချို့အစားအစာတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် မှာရှောင်ကျဉ်ကြရပါတယ် ။ အချို့ပင်လယ်စာများဆိုလျှင် မစားရမယ့်စာရင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ ပါဝင်ပါတယ် ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ပင်လယ်စာတွေဟာ စိတ်ချရပြီး အာဟာရများစွာ ပါဝင်ပါတယ် ။ သို့သော်လည်း အချို့မစားရမယ့် ချွင်းချက်အနည်းငယ်တော့ ရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်နေ့ကို ငါး ၂၀၀ ဂရမ် ကနေ ၃၅၀ ဂရမ် ပတ်ဝန်းကျင်အထိစားပေးသင့်ပါတယ် ။ ငါးတွေပင်လယ်စာတွေစားသုံးပေးခြင်းဟာ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ ပိရိုတိန်း၊ သံဓါတ်နဲ့အိုမီဂါ ဓါတ်တွေကြွယ်ဝလို့ပါပဲ။ တစ်ခြားရောဂါများမရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်သည်များဟာ သွေးအားနည်းခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန် တစ်နေ့ကို သံဓါတ် ၂၇ မီလီဂရမ် နည်းဆုံးသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ကလေးဖွင့်ဖြိုးမှုကို အားပေးရန်အတွက်လည်း တစ်နေ့ကို ပရိုတိန်း ၇၁ ဂရမ် စားသုံးရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ ငါးဟာဆိုရင် ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးပြီးတော့သွေးပေါင်တက်ခြင်း ၊ ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်ခြင်းနဲ့ လမစေ့ပဲမွေးခြင်းတို့မှကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အိုမီဂါဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
မာကျူရီဆိုသည်မှာငါမန်း ၊ ဓါးရှည်နှုတ်သီးငါး ၊ တိုက်ခိုက်တတ် သောငါးများ မှာပါဝင်တဲ့အလွန်အဆိပ်ပြင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မာကျူရီပါဝင်တဲ့ငါးကိုစားသုံးမိတဲ့ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီးများတွင် ကလေးရဲ့ဦးနှောက်ကိုပျက်ဆီးစေနိုင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနှေးကွေးစေပါတယ် ။ တူနာငါးဟာ အခြားငါးများထက်တော့ မာကျူရီပါဝင်မှုနှုန်းနည်းပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာအသင့်အတင့်ပဲစားသုံးသင့်ပါတယ်။
ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားတဲ့ပင်လယ်စာတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာမစားသုံးသင့်ပါဘူး။ ဒါတွေကို အသင့်စားသုံးခြင်းဟာ သင့်ကိုဦးနှောက်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုူ ဖြစ်စေပါတယ် ။ စည်သွပ်ဘူးများနဲ့လာတဲ့ပင်လယ်စာများကို သေသေချာချာချက်ပြုတ်ပြီးမှာစားသုံးခြင်းဟာ စိတ်ချရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များသာမဟုတ်ပဲ ပုံမှန်လူများတွင်လည်း အခွံမာအစားအစာတွေအစိမ်းစားမိတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။ ပင်လယ်စာများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖျားနာခြင်းအများစုဟာ ကမာကောင် ၊ ခုံးကောင်၊ ယောက်သွားကောင်တို့ကိုမချက်ပြုတ်ပဲစားသုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ် ။ ချက်ပြုတ်ခြင်းဟာ ပင်လယ်စာထဲမှာပါလာတဲ့ရောဂါပိုးတွေ၊ ဘတ်တီးရီးယားတွေကို သတ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ အခွံမာအကောင်များကို အစိမ်းလိုက်စားသုံးခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ကြရပါမယ် ။
ငါးနဲ့ပင်လယ်စာတွေဟာ ကလေးရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအားပေးတဲ့အားဟာရများစွာပါသော့လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့နဲ့ပါလာတဲ့မာကျူရီဟာ ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုနဲ့PCBs ဓါတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ။ ဒါကြောင့်အ ချုပ်ဆိုရလျှင် ကိုယ်ဝန်သည်များဟာ ငါးနဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုမရှောင်ရှားသင့်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ငါးကိုသေသေချာချာရွေးချယ်၍သေသေချာချာ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Hello health group သည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း ၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ပေးပါ။
Is it safe to eat fish and other seafood when I’m pregnant?. http://www.babycenter.com/404_is-it-safe-to-eat-fish-and-other-seafood-when-im-pregnant_1380503.bc. Accessed December 30, 2016.
Seafood Do’s and Don’ts When Pregnant. http://www.eatright.org/resource/health/pregnancy/what-to-eat-when-expecting/seafood-dos-and-donts-when-pregnant. Accessed December 30, 2016.
Should You Eat Fish During Pregnancy?. http://www.fitpregnancy.com/nutrition/prenatal-nutrition/should-you-eat-fish-during-pregnancy. Accessed December 30, 2016.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုတက်ခြင်းကြောင့် ဆိုးကျိုးများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများနှင့် ခေါင်းကိုက်ရောဂါအကြောင်း